स्वास्थ्य – Page5– MediaNP
सिल्की, स्टेट र चमकदार कपाल बनाउने चाहना प्राय सबै महिलाहरु हुन्छ । महिलाहरु आफूले सोचेजस्तो कपाल नभएपछि विविध उपायहरु अपनाउन ब्युटि पालर जान बाध्य भएका छन् । बजारमा पाइने केलमुकलयुक्त सामाग्रीको प्रयोगले कपाललाई प्राकृतिक रुपमा
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००६:१५0
अंगुरलाई सुकाएर बनाइने किसमिस धेरैलाई मनपर्दछ । अंगुर खानु जति फाइदा छ त्यतिनै किसमिस खानु पनि मानव स्वास्थको लागी लाभदायिक छ । किनकि यसमा आइरन, पोटासियम, म्याग्नेसियम तथा अधिक मात्रामा फाइबर पाइन्छ । यसले विभिन्न
नेपालमा पछिल्लो समयमा बालविवाह अथात् कम उमेरमै विवाह गर्नु हुदैन् भन्ने विषयमा अंधिकाश मानिसहरु सचेत भएका छन् । विवाह करिब २० देखि ३५ वर्ष बिचमा गर्नुलाई उत्तम मानिन्छ । कम उमेरमै विवाह गर्नाले महिलाको शारीरिक
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००५:५७0
केरा एउटा त्यस्तो फल हो । जुन स्वादमा निकै मिठो हुनुको साथै स्वस्थ्यका लागी फाइदाजनक छ, सबै मौसममा पाइने यो फल अंधिकाशको रोजाएको फल हो । मुख्यत केरामा प्राकृतिक सुगर सुक्रोज, प्रmुक्टोज र ग्लुकोज र
स्वस्थ रहन र शरीरको त्वचामा निखाराता ल्याउनको लागी केहि सब्जी यस्ता रहेका छन् । जसको नियमित रुपमा सेवन गर्नाले त्वचामा निखारता आउने छ । खास सब्जि स्वास्थ्यको लागी मात्र नभएर सौद्धयको लागी पनि उत्तिकै लाभदायक
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००५:४६0
महिलाको शरीरलाई आर्कषक र सुन्दर बनाउने काम अनुहारले मात्रा नभई स्तनको आकारले पनि गर्ने गर्दछ । पछिल्लो समयमा स्तनको आकार सानो भएका महिलाले आर्कषक र ठुलो बनाउनको लागी ठुलो कफ भएको ब्रा लगाउने गरेका छन्
यी हुन् विशेष गरि जाडोयाममा देखापर्ने ५ रोग , यस्ता छन् उपचार विधि !
जाडोयामलाई मौसम उजाड भएको सुख्खा याम हो । यो यामा मौमस सुख्खाको साथमा, चिसो र धुलोधुवाँ अधिक मात्रामा उड्ने कारणले स्वस्थ्यसगँ जोडिएका विभिन्न किसिमका समस्या देखापरी रोगले आक्रमण गर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार जाडोयाममा
सुत्केरी महिलाले दैनिक कति घिउँ सेवन गर्ने ? बेलैमा जान्नुहोस, नत्र ज्यानै जाला
गर्भवर्ती भएपछि महिलाले आफ्नो स्वस्थ्य प्रति निकै ध्यान दिन जरुरी छ । किनकि यो एउटा जटिल अवस्था हो, यस्तो बेलामा स्वस्थप्रति ध्यान नदिएमा गर्भवर्ती महिलालाई समस्या मात्र देखा नपरी ज्यानै जाने जोखिम हुन्छ ।गर्भवस्थालाई खासगरी
महिनावारीको कष्टकर पिडा र अनियमिततालाई यसरी गर्न सकिन्छ, सजिलै समधान !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००५:१७0
साधारणतया महिनावारी १२ देखि १५ वर्षको उमेरमा सुरूमा हुन्छ । करिब २८ दिनको अन्तरमा हुने महिनावारी लगभग ४५ देखि ५५ उमेर भित्रमा रोकिन्छ । यो एउटा शारीरिक परिवर्तनको साथमा एउटा सरसफाइको प्रक्रिया पनि हो । विशेषगरी